Ukuphonononga uyilo lwe-backgammon ekwi-Intanethi-iGeofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/Ukuphonononga uyilo lwe-backgammon ekwi-Intanethi
Ukuphonononga uyilo lwe-backgammon ekwi-Intanethi
Kukho inani elikhulu lamaphepha adidekisa umtyeleli, owathi, enqwenela ukuba angayifumani injongo yeshishini, agqibe ukushiya isayithi ngaphandle kokubangela nayiphi na imiphumo evelisayo. Ke, xa ujongano lokukhangela lwephepha, ibhlog okanye i-portal iphuhliswa, eyona ndlela incinci yokuphazamiseka kwetrafikhi kufuneka ithathelwe ingqalelo. Makhe sijonge umzekelo we i-backgammon ye-intanethi, indawo enoyilo olulula kakhulu kwaye ilungiselelwe ukuvelisa iziphumo zangoku:
1 Ukuhamba ngokubonakalayo.
Ukulungiselela le nto, ukwenziwa kwexesha apho undwendwe lufikelela kwisiza kwaye isigqibo sabo sokuvelisa iziphumo siqwalaselwe. Eli xesha kufuneka ngokubanzi libe ngaphantsi kwemizuzwana elishumi, ukusetyenziswa kwemifanekiso eqhelekileyo kunye nomdla weshishini liqhinga eliqhelekileyo.
2. Inkcazo ecacileyo yemveliso.
Nje ukuba umdla womsebenzisi ufunyenwe, isiza kufuneka siyilwe ukuba sinikezele ngezinto ezinomdla kundwendwe; i-backgammon ye-intanethi Kule nto, isebenzisa iilwimi ezintandathu, iitumente zomdlalo, izipho zovavanyo kunye neprogram yokukhuphela. Inkcazo ecacileyo yemveliso ibalulekile kwiphepha, imveliso yinzuzo yokugqibela yomsebenzisi kwaye ivelisa iziphumo zoqoqosho kwishishini lethu. dlala i-backgammon Kucace gca malunga nemveliso, ukuba iindwendwe zikhuthazwa ukuba zidlale kwaye, ngaphezu kwayo yonke into, ukuba zikhuphele isoftware.
3 Izixhobo ezichaphazelekayo
Amakhonkco amaninzi anendawo, kokukhona kunokubakho ukulahlwa okubonelelweyo, ke kufanele ukuba kube nokuqhagamshela okuyimfuneko kunye nokubuyela kwabo kwishishini; Nokuba ibhlogoli yesiza kufuneka ibe kufanelekile ngokwaneleyo kwaye ivelise. Phakathi konxibelelwano olusisiseko olunikezwe sisiza esiyijongayo lulwazi olungemva kwalo, iintlobo zemidlalo ezibonelelayo, iilwimi ezikhoyo, kwaye kwakhona ... elona shishini liphambili.
Ngamafutshane, indawo ye-Backgammon ilula kakhulu kwaye ivelisa; ucoceko olucocekileyo, ukukhuthaza imifanekiso kwiintlobo zoshishino lakho kunye nohambo oluhambelanayo kufuneka luvelise iziphumo ezilungileyo kwi-ishishini lokudlala kwi-intanethi.
Ulindele ntoni kwiGeospatial ka-2008?
uvotele i-canon yaseColca
Sawubona, indawo elungileyo jonga oku: